श्रीमानले बाटो कुरिरहेका थिए ,अमेरिका जाने तयारी गर्दै थिइन तर दशैंको मुखमा घट्यो यस्तो घ’टना ( भिडियो सहित हेर्नुहोस ) – News Nepali Dainik
आइतबार ३१ आश्विन २०७८
बाबुराम भट्टराईले लगाए ९२ वर्षीय बुवाको हातबाट टीका
दशैंको मुखमा मुगु बस दु’र्घटनामा ३२ को मृ’त्युले गाउँ नै शो’क’मा !
ताप्लेजुङमा दसैँका यात्रु सवार जीप दुर्घटना, १८ जना घाइते
#Rip😭मोटर साइकल भि’र बाट ख’स्दा आफ्नो यति राम्रो परीवार लाई छोडेर सधैंका लागि अ’स्ताए शिवहरी !
श्रीमानले बाटो कुरिरहेका थिए ,अमेरिका जाने तयारी गर्दै थिइन तर दशैंको मुखमा घट्यो यस्तो घ’टना ( भिडियो सहित हेर्नुहोस )
प्रकाशित मिति: आइतबार, आश्विन २४, २०७८ समय: १२:१६:४५
रुपन्देहीमा फेरी एक सोच्ने नसकिने घ’टना घटेको छ। जहाँ रुपन्देही धबाहामा अनिता को घर पर्दछ। अनिताले आफ्नो घर नजिकै सुमन खनाल संग २ बर्ष अघि मात्र मागी बिबाह गरेकी हुन्। बिबाह पछि उनको श्रीमान अमेरिका बस्ने भएको हुनाले उनि पनि आज को दिनमै अमेरिका जादै थिइन्। धेरै बर्ष पछि श्रीमान संग भेट्न पाउदा दुवैजना नै खुशी थिए। अमेरिका जाने तयारी गर्दै गर्दा अनिता आफ्नो कोठामा झु’न्डिए’को अवस्थामा फे’ला परिन।
असोज 23 गते शनिवार, अथार्त आज कै दिन ९ बजे अनिताको अमेरिका जाने फलाईट थियो । श्रीमान अमेरिका भएका कारण उनकै साथ बस्नकालागि अनिताले अमेरिका जाने भिसा लगाएकी थिईन् । उता अमेरिकामा श्रीमान सुमनले श्रीमतीलाई स्वागत गर्नकालागि तयारी सुरू गरिरहेका थिए र यता पनि अनितालाई बिदाईको उस्तै तयारी चलिरहेको थियो । घरमा बिदाईकोलागि साईतको टिका मुछिएको थियो। माईती घर पसेर अनिता बुवा सगँ मनकामना मन्दिर दर्शन गरेर अमेरिका जाने तालिका मिलाईएको थियो।
छोरीको प्रतिक्षामा माईतीहरू बसिरहेका थिए तयारी अन्तिम हुदै थियो त्यतिकैमा छोरीको घरबाट एउटा फोन आयो जसकोकारण माईतीमा रूवाबासी चल्न थाल्यो। माईती पक्ष आत्तालिदै छोरीको घर पुग्दा छोरी अनिता आफ्नै कोठो भित्र झु’ण्डिरहेकी हुन्छिन। घ’टना यहि असोज २० गते बुधवार दिउसो झण्डै २ बजे तिरको हो । अनिताको नोट लेख्ने बानि रहेछ जुन नोट हामिले फेला पारेकाछौँ जसमा उनले घरमा भोगेका कुराहरू सबै लेखेकीछन् ।
समग्रमा उनले लेखेको कुराहरूबाट यो बुझ्न सकिन्छ कि घर परिवारबाट उनले माया पाउन सकेकिछैनन्। श्रीमानले माया गरेपनि सासु र देवरले उनलाई टचर दिने, दाईजो देखि लिएर पैसा र सुनका बिषयमा सासुले यातना दिने जस्ता कुराहरू उनले नोटमा लेखेकिछन्। अनिता रेग्मीको २ वर्ष ८ महिना अघि सुमन खनालसगँ माघि बिवाह भएको थियो , बिहे भएको १ महिना पछि सुमन अमेरिका गएका थिए।
दिउँसो घर आएर नै कुरा गर्छु है बुबा ।’ गत बुधबार अर्थात् असोज २० गते बिहान करिब साढे ७ बजेतिर बाबु रामचन्द्रसँगको केही समय भेट्दा अनिता रेग्मीले भनेकी थिइन्। केही दिनअघि माइतीघरमा आएकी छोरीले दराजको साँचो छोडेपछि बिहान नै साँचो पुर्‍याउन रामचन्द्र छोरीको घर नजिकै पुगेका थिए। २० मिनेटजति मोटरसाइकलको यात्रा गरेर बाबुले बुटवल उपमहानगरपालिका–१३ स्थित ढावहलवामा छोरी अनिताको घर नजिकै पुगेर साँचो दिए। तर, उनी छोरीको घरमा भने गएनन्। छोरीसँग दिउँसो भेट्ने आशामा उनी त्यहीबाटै फर्किए। दिउँसो छोरीसँग भेटघाट हुनेमा विश्वस्त थिए, उनी।
Last Updated on: October 10th, 2021 at 12:16 pm
३३ पटक हेरिएको
दशैंको बेला जो कोहिलाई रुवाउने सुदनको स्वर सुन्नुहोस्, दुर्गम गाउँमा भेटिएको एक प्रतिभा (हेर्नुहोस भिडियो )
दशैँ र तीजमा दुइटि छोरी बोलाउदा नि आएनन, गुल्मीकी लास्टै हसाउने ८७ बर्षिय आमाको घरमा पुग्दा रुवाबासी चल्यो
महानायक विवाद : ‘राजेश हमालको अभिनय मापन गर्ने अधिकार निश्चल बस्नेतलाई छैन’
३० गते शनिबार तपाईको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुहोस राशिफल
सेलिब्रेटीले कसरी मनाउँछन् दसैँ ?
टीका लगाइदिँदा भन्ने आशिर्वाद मन्त्रको अर्थ